yakanakisa nhema chishanu 2021 madhiri kubva pane zvakanak kutenga: zvatinotarisira
Kuru Nhau & Ongororo Yakanakisa Nhema Chishanu 2021 madhiri kubva kuKutenga Kwakanyanya: zvatinotarisira
Nhema Chishanu 2021 inogona kunge iri mwedzi kubva pano, asi sezvo chiitiko chekutenga ichi chiri chikuru pagore, & apos; haina kumbonyanya kukurumidza kutanga kugadzirira. PaBlack Chishanu 2021 isu & apos; isu tese tichakwanisa kutenga edu anodikanwa mafoni, mapiritsi, smartwatches, mahedhifoni uye zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi zvingangove akanakisa, akaderera mutengo paGood Buy.
Kana iwe & apos; uchifarira kudzidza nezve 2021 Best Buy Nhema Chishanu chiitiko, seku mune zvaunotarisira, maererano nezvigadzirwa zvichadzikiswa, iwe & maapuro mouya kurudyi nzvimbo. Pakangotanga Best Buy kutanga kupa Black Chishanu madhiri, isu & apos; tichava nezvakanakisa zvako izvozvi pano. Uye izvozvi Amazon Prime Day yave kumashure kwedu, Nhema Chishanu ndiyo chiitiko yekutenga chatinotarisira.
Nhema Chishanu 2021: zuva, madhiri, nhau uye zvinotarisirwa
Amazon Prime Day 2021: zuva, madhiri, nhau uye zvinotarisirwa
Yakanakisa Target Nhema Chishanu madhiri: zvatinotarisira
AirPods Amazon Prime Day inobata: zvaunotarisira
Akanakisa Amazon Prime Day smartwatch madhiri
Gore rino, Nhema Chishanu ichawa munaNovember 26, zvingangoita. Mwaka wadarika, Best Buy yaive nezvinoshamisa zvinowanika mumwedzi wese waMbudzi uye vazhinji vakasetsa kuti ndeiyo 'Nhema Mbudzi' pachinzvimbo cheBlack Chishanu. Kunyangwe isu tisingagoni & apos; kuva nechokwadi kana mamiriro akafanana achaitika gore rino, isu tinotenda madhiri erupo achave aripo paBest Buy patinoswedera padyo neBlack Friday.
Ko Best Buy ichave neBlack Chishanu kutengesa?
Best Buy ichabatana neBlack Chishanu yekutenga chiitiko sezvo iine chero gore rapfuura. NeChishanu Chishanu, Best Buy ichave ichitengesa zvigadzirwa zvetekinoroji pamimwe mitengo yayo yepasi uye ichitangisa zvine mutsindo mabhenefiti ayo akanaka ekutenga egore
Ndechipi chiri Best Buy Nhema Chishanu 2021 chiitiko?
Chiitiko cheBlack Chishanu chiri munaNovember 26 muna 2021, kunyangwe ichitonga nemakore apfuura, Best Buy ichatanga kuburitsa mitengo uye madhiri pamberi peiyo, pamwe panongouya Mbudzi. Ramba wakatarwa!
Best Buy & apos; zvitoro zvinovhurwa rini musi weChishanu Chishanu?
Kunyangwe vazhinji venyu vangango sarudza kutenga pamhepo, vamwe vanogona kunyatso kufarira iyo chaiyo-hupenyu hwekutenga ruzivo. Kune avo vamuri kuda kuenda mumunhu kuzvitoro zveBest Buy & apos; garai muchifunga kuti zvimwe zvezvitoro zvinovhurwa kutanga na5 AM paBlack Friday. Nekudaro, izvi zvinogona kunge zvisiri izvo kune ese Zvitoro Zvakanakisisa Zvitoro, saka kubheja kwakanyanya ndekwekutarisa Yakanakisa Buy & apos; peji rechitoro chemuno kuti uve nechokwadi chekuti chitoro chiri padyo newe chichava chakavhurika kana iwe uchienda kunotenga spree.
Ndeapi akanakisa eChishanu Chishanu madhiri kubva kuBest Buy?
Tichitarisa nezvakapihwa Zvakanakisisa Kutenga zvakatomisirwa chiitiko chapfuura cheChishanu Chishanu, mamwe emabasa ayo akanakisa anosanganisira mureza, wepakati nepakati uye bhajeti mafoni pamitero yakakosha, kuderedzwa kwemutengo wepiritsi, smartwatches, mahedhifoni uye nezvimwe. Heano maapuro madhiri akanakisa atinotarisira kuona panguva yechiitiko chikuru chekutenga paGood Buy, yakarongedzwa nezvikamu:
Yakanakisa Nhema Chishanu 2021 smartphone inobata pa Best Buy kutarisira
Zvigadzirwa na Apple , senge iyo iPhone 12 dzakapihwa pakuderedzwa kwemutengo kana ukasaina account nyowani, kana kusvika pamakumi mashanu kubva muzana nekutengesa-mukati, kumashure mu2020. Kwaive nezvibvumirano zvakafanana zve iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro uye iPhone 12 Pro Max . Iyo iPhone 11 yakateedzana zvakare yakanakidzwa nemitengo yakasimba. Kubva pane izvo, isu tinogona kutoona iri kuuya iPhone 13 dzakateedzana yakaderedzwa pamutambo weBest Buy Nhema Chishanu 2021.
Samsung mafoni emafoni zvakare akanakidzwa nekudzikiswa kwemitengo inosvika kumadhora mazana mana emamwe emhando dzekupedzisira paChishanu Chishanu Kubva kumusoro-kumagumo Galaxy S20 Ultra 5G , pasi peiyo yakakosha-yakazara Galaxy S20 FE, mazhinji emafoni anopisa eSamsung & apos; aive, uye achave aripo akadhura zvakanyanya kupfuura zvakajairika paChishanu Chishanu. Izvi zvinogona kungoreva kuti iyo Galaxy S21 nhepfenyuro ichaona kumwe kuderedzwa rudo gore rino, uye saizvozvo mafoni akapetwa senge Z Fold 2 uye Z Flip.
Zvakanaka, isu tinogona zvakare kuona zvimwe zveChishanu Chishanu zvinoderedzwa pane iyo Z Peta 3 uye iyo Z Flip 3 (iyo ichaziviswa muna Nyamavhuvhu).
Ehezve, akasiyana akasiyana mamwe mafoni, senge Google Pixel 5 , kupeta Motorola Razr (2020) ($ 450 yabviswa) uye Samsung Galaxy Z Flip , pamwe nekaviri-skrini Microsoft Surface Duo ($ 300 yabviswa) zvese zvaive zvichipiwa pamitengo yakadzikiswa paBest Buy musi wekupedzisira weChishanu Chishanu, uye zvingangove zvakachipa pamutambo weBest Buy & apos; s 2021 Nhema Chishanu.
Yakanakisisa Tenga Nhema Chishanu 2021 mapiritsi uye mahedhifoni madhiri kutarisira
Iwe unogona zvakare kuwana inonakidza: Akanakisa Amazon Prime Day piritsi
Panyaya yemapiritsi, mapiritsi e Samsung Galaxy uye Apple iPads ndiwo akanyanya kutengeswa nemitengo yakadzikira paBest Buy paBlack Friday. Isu takaonawo Microsoft Surface Pro Windows mapiritsi (mamwe anosvika kumadhora mazana mana nemakumi matatu) uye maAmazon & apos; s Mahwendefa eMoto anobatanidzwa mune mamwe maBest Buy Black Chishanu madhiri.
Zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi, senge yepamusoro tier pamusoro-nzeve mahedhifoni kubva kuSennheiser, Beats, nevamwe, pamwe nemahedhifoni kubva kuSamsung, senge Galaxy Buds Rarama dzakapihwa zvakachipa neBest Buy. Isu takaona zvakare kudzikiswa kwakasimba paApple & apos; s maPodPod mamodheru, uye izvo zvidzikiso zvaive pakati pe $ 40- $ 50. Pamwe, tichaona iyo AirPods Max yakadzikiswa futi, panguva ino yeChishanu Chishanu.
Yakanakisisa Tenga Nhema Chishanu 2021 smartwatch madhiri: zvaunotarisira
Panyaya yemawatchwatches, iyo hombe yekutenga chiitiko haina kuodza moyo. Isu takaona zvine mwero zvidzikiso pane Apple Watches uye Galaxy Watches. Gore rino, vese Apple neSamsung vangadai vakaburitsa yavo nyowani smartwatches panguva iyo Chishanu Chishanu inotenderera. Saka, izvi zvinogona kureva kuti unogona kumirira zvakachengeteka Mbudzi kuti utenge yako nyowani Apple Yekuteedzana 7 kana Galaxy Tarisa 4 kana iwe & apos; tichironga pane yekuvandudza.
Mazhinji smartwatches kubva kune mamwe mabhureki, akadai saFitbit naGarmin, akatorwawo. Semuenzaniso, Fitbit smartwatches madhiri eBlack Chishanu yakabva pamadhora makumi maviri kusvika pamadhora makumi mashanu kubva.
Yakanakisisa Tenga Nhema Chishanu 2021 inotarisirwa kudzikisira pamalaptop neTV
Best Buy zvakare ine makuru laptop madhiri eBlack Chishanu, ine zvinokwezva zvidzikiso pane ese ari maviri bhajeti Lenovo malaptop uye epamusoro-magumo Apple MacBook Pro mamodheru. Iyo 12-inch Retina Ratidza i5 MacBook ine 8GB ye RAM uye 512GB yekuchengetedza, semuenzaniso, yaive $ 288 yabviswa. Tinogona zvakare kutarisira makuru MacBook uye Windows laptop madhiri kubva kuBest Buy paBlack Chishanu 2021.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, takaona yakanakisa Kutenga mutengo kudzikiswa pane yepamusoro-kumagumo TV & apos; s, senge Samsung & apos; s 75-inch Q900TS Series LED 8K Smart Tizen TV, yaive $ 2000 yakachipa pachiitiko cheBlack Chishanu. Ehezve, mamwe maTV-ane hushamwari maTV, pamwe nemidziyo yekuchenjera yemumba yakadai seRing Video Doorbell yakadzikiswawo paGood Buy.
Akanakisa Kutenga madhiri ararama izvozvi
Tichiri nemwedzi mishoma kubva pachiitiko chikuru chekutenga, asi Best Buy mutengesi uyo anogara achibata akasiyana madhora uye anoita pazvinhu zvinopisa. Heano & apos; izvo zvatiinazvo izvozvi zviripo maererano neatekinoroji madhiri pane Best Buy pamberi peBlack Chishanu:
Sevha madhora zana nemakumi mashanu neyakagadziriswa activation paVerizon / AT $ T / Sprint-T-Mo.
$ 72999 Tenga paGoodBuy
$ 100 yabviswa (10%)$ 89999$ 99999 Tenga paGoodBuy
$ 200 yabviswa (15%)$ 109999$ 129999 Tenga paGoodBuy
$ 100 yabviswa (14%)$ 59999$ 69999 Tenga paGoodBuy
Samsung Galaxy Cherechedzo 20
$ 300 kubviswa (30%)$ 69999$ 99999 Tenga paGoodBuy
Vadzidzi vanochengetedza $ 150, yakatemwa nguva yekupa
$ 104999 Tenga paGoodBuy
$ 50 yabviswa (22%)$ 17999$ 22999 Tenga paGoodBuy
+ 6 mwedzi yemahara Apple Music
$ 59 yabviswa (11%)$ 48999$ 549Tenga paGoodBuy
$ 50 yabviswa (33%)$ 9999$ 14999 Tenga paGoodBuy
+ 6 mwedzi yemahara Fitbit Premium
$ 29995 Tenga paGoodBuy
Tichakamirira Best Buy Nhema Chishanu 2021 madhiri, inzwa wakasununguka kutarisa edu epamazuva ano madhiri, aunogona kutora mukana izvozvi:
Mazhinji madhiri apfuura
Kuuraya chibvumirano chitsva kunoita Google & apos; s Pixel 5 yakachipa pane iyo Pixel 4a 5GSevha - $ 270 1 awa rapfuura,naAdrian Diaconescu, 0 Sony & apos; s WH-1000XM3 premium mahedhifoni anodonhedza ku $ 189.99Sevha $ 160 kubva Iredxpired Maawa gumi nemana apfuura,naMariyan Slavov, 1 Rimwe zuva, imwe huru Apple AirPods Pro dhiriIredxpired Maawa gumi nemashanu apfuura,naAdrian Diaconescu, 1 Iyo Samsung Galaxy Watch 3 iri kutengeswa pamutengo unoshamisa nepasi ne4G LTEnezuro,naAdrian Diaconescu, 0 Iyo inoshamisa OnePlus 7T Pro 5G McLaren iri kutengeswa pamutengo wakakuraSevha - $ 500 Iredxpired nezuro,naAdrian Diaconescu, 0 Chibvumirano chitsva chinoita iyo yekare Samsung Galaxy Tab Inoshanda 2 hwakanakisa hwendefa raunogona kutengaSevha - $ 150 Iredxpired nezuro,naAdrian Diaconescu, 0 Galaxy Z Flip 5G uye Z Fold 2 ikozvino yakachipa kupfuura nakare nezvakawanda izviSevha - $ 300 nezuro,naIskren Gaidarov, 0 Iwe unogona achiri chengetedza $ 200 pane iyo Galaxy S21 + foninezuro,naMariyan Slavov, 0 Vanyoreri veAmazon Music vari kuwana mwedzi mitanhatu yeDisney + mahara2 mazuva apfuura,naCosmin Vasile, 0 Kwechinguva chidiki, Nokia 8.3 ndeimwe yemhando dzakachipa dze5G smartphones muUS3 mazuva apfuura,naCosmin Vasile, 1 Iyo Google Pixel Mira inoda kusvika 60% kubviswa paAmazon3 mazuva apfuura,naCosmin Vasile, piri Iyo OnePlus 9 iri kutengeswa pamutengo unoshamisa ne12GB RAM uye 256GB yekuchengetedza3 mazuva apfuura,naAdrian Diaconescu, 0 Ona mamwe madhiri
verizon nhema chishanu inobata 2020
iri 64gb inokwana iphone
5 yemahara password maneja maapplication eApple & iOS ayo anochengeta macode ako kure nemuvengi
Kwakachengeteka here kutakura nhare muhomwe yako? Apple uye Samsung yakarova neRF radiation radiation
Iyo iPhone X yakakodzera kutenga?
Yambiro yevanoshandisa iPhone: zvinoshamisa zita reWi-Fi network inogona kutyora foni yako & apos; s yekubatana
Webhu Kunyorera Kugadzira Maitiro
Apple inohwina hombe Hekodhi Hodhi app kuhwina nekubatana neMayo Clinic